श्रीमतीको पल्गिने बिन्दु पत्ता लगाउनुहोस् : सबै व्यक्ति कुनै न कुनै बिन्दुमा आफ्ना भावनाहरुसँगै पग्लन्छन् । अर्थात् उनीहरु त्यस बिन्दुमा नरम रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् ।
आत्म समर्पण गर्नुहा्स् : चुपचाप बस्नु या बहस गर्नुको साटो कहिलेकाहीं आत्म समर्पण गर्नु पनि सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प हुन सक्छ । यसको लागि आफ्नो शारीरिक हाउभाउबाट पनि श्रीमतीसँग सहमत भएको जनाउन सकिन्छ । टाउको हल्लाउने र ढिलो श्वास छोड्नाले पनि तपाईंले उनको कुरामा आत्मसमर्पण गरेको जनाउदिन सक्छ ।
आफ्नो पार्टनरसँग यी कुरा गर्न ढिलो नगर्नुहोस्, दाम्पत्य जीवनै समस्यामा पर्न सक्छ !
सपनामा यी चिज देखे के हुन्छ ? दिन्छ यस्तो संकेत
कुखुरा फर्ममा आगलागी हुँदा १७ सय कुखुरा जले